Tirada Dhimasha Xujeyda Ayaa Gaartay 717 Iyo 800 oo Dhaawac Ah | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — September 25, 2015
Wararkii ugu dambeeyay ee jahwareerka ka taagan magaalada Mina oo wax yar u jirta magaalada Makka ayaa waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay iminka sii cago-cageyneyso 717-ruux.
Dhaawaca ayaa isna kordhay, waxaana tiradiisu ay mareysaa 805 oo ruux. Dowladda Sucuudiga ayaa dadaal ba`an ugu jirta in ay xakameyso shilkan, waxaana ay goobta u dirtay xoojin ciidan.
Dadka qaar ayaa sheegaya in mashaqadani timid kadib markii uu shil ka dhacay wadadii la marayay ee ay dadka ku qul-qulayeen.
Xilliga uu shilkani dhacayay ayay aheyd xilliga “dhagax tuurka”, oo sheydaanka la dhagaxeeyo.
Next post Maxaa Mooshinkii Madaxwaynaha Loogu laabtay?
Previous post Kalsoonidda Nafta Waa Guusha Dhabta Ah